Amavolontiya - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
I-Prairie State inikela ngamathuba wokuvolontiya ahlukahlukene kubantu abanamabanga onke wamakhono nokuhlangenwe nakho.
Chofoza Lapha ukuze uthole Uhlelo Lokuzibandakanya Kwezisebenzi Zokuzithandela
UMMELI AMABHONO AMABHONO PRO
“Kungumsebenzi walabo abanamalayisense njengezikhulu zenkantolo ukusebenzisa ukuqeqeshwa kwabo, ulwazi abanalo namakhono abo ukuhlinzeka ngezinsizakalo zomphakathi ukuze kuzuze isinxephezelo…. Imizamo yommeli ngamunye kulezi zindawo iwubufakazi besimilo esihle segqwetha nokuqina kokusebenzisa umthetho… ”
Isendlalelo, Imithetho Yokuziphatha Okufanelekile e-Illinois
Unyaka nonyaka iPrairie State Legal Services iphoqeleka ukuthi yenqabe izicelo zosizo lwezomthetho ezivela kwamanye amalungu asengozini kakhulu emphakathini wethu ngoba abasebenzi bethu abakhokhelwayo abanawo amandla okuhlangabezana nezidingo. Ngaphandle kosizo lwezomthetho, laba bantu bashiywe ukuzulazula kuleyo maze esemthethweni futhi abaningi bamane bayeke.
Amavolontiya ePro bono abelokhu esiza uMbuso wasePrairie ukuvala igebe lobulungiswa kusukela ngawo-1980. Uma wamukela icala elilodwa kuphela le-pro bono elivela ePrairie State, uqinisekisa ukufinyelela okulinganayo kwezobulungiswa kulowo muntu. Izibonelo zezinhlobo zamacala ongasiza kuzo zifaka phakathi ukusiza osindile odlame lwasekhaya athole ukuvikeleka kumhlukumezi wakhe; ukunika amandla ophethe ukulawula izinqumo zakhe zezezimali nezokunakekelwa kwempilo ngokwenza izinkomba ezisezingeni eliphakeme; noma ukuvikela umuntu okhubazekile ekunqatshelweni okungekho emthethweni kwezinzuzo zomphakathi.
IPrairie State inikela ngamathuba amaningi ahlukahlukene wabameli abameli, kusukela emitholampilo yezeluleko kuya ekubonisweni okwandisiwe kumathuba wokuthengiselana wesikhashana njengokuqamba amandla abameli namafa, noma izingxoxo nezinhlangano zikahulumeni. Izindawo lapho amakhasimende adinga khona usizo lwakho zingafaka: isehlukaniso nokugcinwa; ukunakekelwa okuncane nabadala; amafa alula; ukuqoshwa nokufakwa uphawu kwamarekhodi obugebengu; nokuqothuka nezinye izindaba zabathengi.
Ukuzinikela kwesikhathi kuyehluka ngamacala, futhi akuwona wonke amacala adinga ukuvela enkantolo. Amavolontiya futhi angafundisa abanye abameli be-pro bono futhi axhumane nabasebenzi boMbuso wasePrairie.
Awudingi ulwazi lwangaphambilini losizo lwezomthetho ukuze uvolontiye. Umsebenzi we-Pro bono uyindlela ezuzisayo yokuthola ulwazi endaweni entsha yomthetho, noma ukululeka omunye ummeli endaweni yangakini yobungoti. Sizosebenzisana nawe ukwenza i-pro bono ithuba elithandayo, amakhono, nokutholakala.
Kungani kufanele uzinikele ePrairie State?
Ukwenza umsebenzi wakho we-pro bono ngokusebenzisa i-Prairie State Legal Services kuza nezinzuzo ezingeziwe:
IPrairie State icacisa amacala wokufaneleka nokufaneleka kwezezimali.
Amacala e-Pro bono ahlanganiswa ngaphansi komshuwalense wokungaziphathi kahle wasePrairie State.
IPrairie State inikeza ama-CLE amahhala kubameli bompro bono.
Ungasizakala ngokuqeqeshwa nokwelulekwa ngabameli abanolwazi.
Amahora we-Pro bono angabikwa ekubhalisweni kwakho kwe-ARDC ngonyaka.
Ukuthatha umhlalaphansi, ukungasebenzi, ukuphuma kwezwe, noma iseluleko sendlu?
Imithetho yeNkantolo Ephakeme yase-Illinois engu-716 no-756 ivumela umhlalaphansi, ongasebenzi, ongaphandle kwezwe, kanye nommeli wendlu ukwenza izinsizakalo ze-pro bono zePrairie State Legal Services.
IPrairie State ihlala ifuna abameli abazomela amaklayenti ezindabeni ezahlukahlukene zezomthetho, ikakhulukazi emacaleni omthetho wabomndeni, abathengi nabadala. Uma unemibuzo noma ungathanda ukuthola eminye imininingwane ngamathuba wethu wamanje we-pro bono, sicela uxhumane nomxhumanisi wakho wehhovisi langakini noma [i-imeyili ivikelwe].
Uma ungumfundi onentshisekelo yokuzibandakanya nePrairie State, sicela ubheke ifayela le- internship isigaba esigabeni se- Careers ikhasi.
Amavidiyo Wokugubha we-2020 Pro Bono
Samukela usizo oluvela kuwo wonke amavolontiya. Ungakwazi sisize ukuvala igebe lezobulungiswa ngokuphendula izingcingo, ukuhlela imicimbi yokuqongelela imali, ukulungisa ukuthunyelwa, ukusiza abameli bethu, nokusiza amaklayenti asePrairie State ngezindlela ezahlukahlukene.
Umhloli weProjekthi Yezindlu Ezifanele
Leli thuba elenzelwe abantu abahlala noma eduze kwesinye sezifunda ezilandelayo: iLake, McHenry, Winnebago, Boone, Peoria, noma iTazewell.
IPrairie State Legal Services Fair Housing Project ifuna abahloli abazosiza ukuphenya ngokubandlululwa kwezindlu. Ngemuva kokuqeqeshwa, abahloli bahlangana nabahlinzeki bezindlu futhi babhale ukusebenzisana kwabo embikweni. Abasebenzi bethu bese bebuyekeza bese beqhathanisa imibiko evela kubahloli abahlukahlukene ukuthola ukuthi ngabe ukubandlululwa kwezindlu kwenzeka yini. Samukela abantu abakhubazekile nabantu bazo zonke izinhlanga, imibala, ubudala, izinhlanga, nezindlela zobulili.
Thola ukubuyiselwa kwemali ebekiwe kanye nemayela njalo lapho ubamba iqhaza esivivinyweni.
Thola ukuqeqeshwa kwezindlu okufanelekile (kanye nemali esetshenziswayo ngemuva kokuphothula ukuhlolwa kokuzijwayeza).
Funda amakhono amasha, kufaka phakathi nokubhalwa kombiko.
Siza ukwenza umphakathi wakho ubandakanyeke futhi wamukele ngokwengeziwe.
abahloli KUMELE babe nazo
umazisi okhishwe uhulumeni
ukugunyazwa kokusebenza e-United States
ukufinyelela kwezinto zokuhamba
ukulahlwa ngamacala okuqala noma ukulahlwa ngamacala obugebengu obuhlanganisa ukukhwabanisa noma ukuqamba amanga
ilayisense ye-real estate esebenzayo
Sicela uxhumane nomxhumanisi wethu wokuhlola, uJennifer Cuevas, ku [i-imeyili ivikelwe] noma ku-815-668-4412, ukucela isicelo, noma uma unemibuzo ngaleli thuba. Sicela usho indawo ohlala kuyo ku-imeyili yakho. Sithemba ukuzwa kuwe!
Xhumana noMqondisi Wezisebenzi Zokuzithandela zePrairie State ukuthola eminye imininingwane ngamathuba wokuvolontiya angewona abameli endaweni yakho. (i-imeyili: [i-imeyili ivikelwe])
IZIMAHLA ZE-AMERICORPS VISTA EZIKHONA
Amahora: NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu, ngo-8: 30 ekuseni kuya ku-5: 00 ntambama (ngokuvamile)
Kuyini i-AmeriCorps VISTA?
Uhlelo lwe-AmeriCorps-VISTA luhlelo lwenkonzo kazwelonke lapho abantu bezibophezela onyakeni ogcwele wenkonzo yesikhathi esigcwele ukusiza ukulwa nobuphofu. Ngokubuyisela umsebenzi wabo, amalungu anikezwa ukuqondiswa nokuqeqeshwa, imali ephilayo engaba ngu- $ 970 ngenyanga, izinzuzo zokunakekelwa kwezingane, kanye nohlelo oluyisisekelo lokunakekelwa kwezempilo. Lapho beqeda isikhathi sabo sonyaka owodwa, amalungu e-VISTA anenketho yokuthola isibonelelo esincane noma umklomelo wemfundo ka- $ 5,645.
Kunezinye izinhlobonhlobo zezinye izinzuzo ezibandakanya ukucatshangelwa okukhethekile kokuqashwa kombuso. Yize lezi zinzuzo zilusizo, inzuzo yangempela yohlelo lwe-VISTA yisipiliyoni sangempela sokwenza umehluko emphakathini.
Ama-VISTA ePrairie State Services Legal
IPrairie State Legal Services iyinhlangano engenzi nzuzo enikezela ngezinsizakalo zomphakathi zosizo ngaphandle kwenkokhiso kubantu abahola kancane enyakatho nasenkabeni ye-Illinois. IPrairie State inamahhovisi eBloomington, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rock Island, Rockford, St. Charles, Waukegan nase Wheaton, e-Illinois. Ezinye zezikhundla zethu ze-VISTA ziqonde ngqo emahhovisi athile futhi kwamanye amaphrojekthi sinokuguquguquka okuningi lapho singabeka khona i-VISTA.
Ama-VISTA aqhamuka kokuhlangenwe nakho okuhlukahlukene kubandakanya iziqu zakamuva zasekolishi, abameli, ochwepheshe asebethathe umhlalaphansi, nabantu abangena kabusha emsebenzini. Ngenkathi izikhundla zinemigomo nezinhloso ezithile, ama-VISTA aletha amathalente abo ahlukile kanye nobuchule kulesi sikhundla. Kungamandla, ubuhlakani, namathalente ama-VISTA ethu kanye nokusebenzisana okuhle okwenzele izinhlelo eziphumelele kakhulu.
Bhalisela i-VISTA ku:
Faka isicelo salezi zikhundla ku:
Uma unemibuzo, xhumana noGail Walsh ku [i-imeyili ivikelwe].
“Umsebenzi wePro Bono usho ukuthi usiza umuntu odinga usizo futhi ongenayo indlela yokuqasha ummeli ozimele. Kodwa futhi kuyithuba lokuba nomthelela omuhle emphakathini esihlala kuwo. ”
Umakhelwane waseBozeman Patton & Noe, LLP (Moline, IL)
“Kungigculisa kakhulu. Kuyangisiza ukusiza abantu ngoba ngiyakujabulela ukusiza abantu. Futhi uma ngisiza umuntu futhi ekugcineni kwecala bayanganga noma bamomotheka bathi ngiyabonga kakhulu ngokungisiza, ngethemba ukuthi ngiyakwazi ukubasiza empilweni yabo futhi ngibasuse esimweni. ”
IVan Der Snick Law Firm, Ltd. (iSt. Charles, IL)
“Noma yini ozimisele ukuyenza noma ongayenza, noma ngabe kungukushaya ucingo noma ukuphendula imibuzo. Kungumsebenzi ozuzisa kakhulu uma uwenza futhi usiza laba bantu abadinga usizo. ”
I-Zanck, Coen, Wright neSaladin, i-PC (iCrystal Lake, IL)
“Ngibona umsebenzi ufeza ngendlela eyisimanga, ikakhulukazi umsebenzi engiwenzayo. Kunabantu abazama ukuthola ithuba lesibili empilweni futhi babonga kakhulu kunoma ngubani obakhathalelayo futhi imiphumela iye yanelisa kakhulu. ”
Umndeni nokuphepha. Ubuwazi yini ngekota eyodwa (26%) yayo yonke imindeni ehola kancane ibe nenkinga okungenani eyodwa ehlobene nezindaba zomndeni noma ukuphepha komuntu siqu. Izibalo ziphezulu kakhulu ezindlini ezinezingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 (44%). Izinkinga ezivame kakhulu kuyo yonke imindeni ekule ndawo zihlanganisa udlame lwasekhaya (oluhlasela amaphesenti ayishumi ayo yonke imizi), izinkinga zokuqoqa noma zokukhokha isondlo sezingane (10%), nokuhlukana noma isehlukaniso (9%). Umthombo: LSC 2021 Justice Gap Measurement Survey	... Buka OkuningiBheka okuncane